၇. ၉. ၂၀၂၀ ရက်
နံနက် ၉ နာရီ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့တော်ခန်းမတွင် ပြုလုပ်သည့် ရေရရှိရေးနှင့် ရေပေးဝေရေး လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၏ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်ခြင်း
၇. ၉. ၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၉ နာရီ --------------- ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့တော်ခန်းမတွင် ပြုလုပ်သည့် ရေရရှိရေးနှင့် ရေပေးဝေရေး လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၏ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်......
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဝန်ဆောင်မှုများအား Mobile Application ဖြစ်သော MY CITY APP ကို အသုံးပြု၍ Smart Phone ဖြင့် တစ်နေရာတည်းမှ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလွယ်တကူရယူ ပေးဆောင်နိုင်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ စက်မှုဇုန်အမှိုက်သိမ်းဝန်ဆောင်မှု၊ ဆေးရုံ ဆေးခန်းအမှိုက်သိမ်းဝန်ဆောင်မှု၊ ရေပုပ်စုပ်ယာဉ် ဝန်ဆောင်မှုအစရှိသော ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်...
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဝန်ဆောင်မှုများအား Mobile Application ဖြစ်သော MY CITY APP ကို အသုံးပြု၍ Smart Phone ဖြင့် တစ်နေရာတည်းမှ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလွယ်တကူရယူ ပေးဆောင်နိုင်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ စက်မှုဇုန်အမှိုက်သိမ်းဝန်ဆောင်မှု၊ ဆေးရုံ ဆေးခန်းအမှိုက်သိမ်းဝန်ဆောင်မှု၊ ရေပုပ်စုပ်ယာဉ် ဝန်ဆောင်မှုအစရှိသော ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ၏ ဝန်ဆောင်မှုများအား MY CITY APP ဖြင့် On Call ခေါ်ယူဆောင်ရွက်နိုင်မည် သာမက အဆောက်အဉီဆောက်လုပ်ခွင့် (YBPS) ပါမစ်ဝန်ဆောင်ခ၊ ရေသွယ်ယူခွင့် (Water Connection) ဝန်ဆောင်ခအစရှိသော အခွန်အခများပေးသွင်းမှုအတွက် ငွေပေးချေမှုများကိုပါ တစ်ပါတည်း ဆောင်ရွက် နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ငွေကြေးပေးချေခြင်းများကို အလွယ်တကူဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်၏ City Pay Mobile Wallet ကိုပါ MY CITY APP တွင် ထည့်သွင်းချိတ်ဆက်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ Yangon City Bank (ရန်ကုန် မြို့တော်ဘဏ်)တွင် CITY PAY Wallet Account ဖွင့်လှစ်၍ Wallet Top-up ပြုလုပ်ခြင်း၊ Wallet to Wallet ငွေလွှဲပြောင်းခြင်း၊ Bill ပေးချေခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပြီး Wallet Top-Up ငွေဖြည့်ခြင်းကို Yangon City Bank (ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်)၊ CB Pay၊ UAB Bank ၏ Sai Sai Pay တို့မှတစ်ဆင့် ပေးသွင်းနိုင်ပြီး မိတ်ဖက် Digital Channel ဖြစ်သည့် OK$ မှတစ်ဆင့် လည်း ပေးသွင်းနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
MY CITY APP ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကော်မတီ၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အခွန်အခများကို Smart Phone အသုံးပြု၍ နေ့ညအချိန်မရွေး ပေးသွင်းနိုင်ခြင်း၊ ကော်မတီ၏ စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာဖြင့် ရယူအသုံးပြုနိုင်ခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိနိုင် မည်ဖြစ်သော ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ MY CITY APP အား Play Store တွင် Download ရယူအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
Official Website of Yangon City Development Committee...
ရန်ကုန်မြို့တော်ရေဖူးလုံရေးစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရန် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၈၀ ချေးငွေရယူရေးကိစ္စကို ၂၄-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါစီမံကိန်းမှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ငမိုးရိပ် ဆည်မှ ရေကို မြေသားရေပေးမြောင်း(Open Channel)ဖြင့်...
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီရဲ့ လက်ရှိရေပေးဝေရေးစနစ်၏ ရေအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သော ငမိုးရိပ်ရေသန့်စင်စက်ရုံ(ညောင်နှစ်ပင်)သည် လိုအပ်သော Raw Water ကို ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ လှည်းကူးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိသော ငမိုးရိပ်ဆည်၏ လက်ယာရေပေးမြောင်းမကြီးမှ တဆင့် ငမိုးရိပ်ရေသန့်စင်စက်ရုံ(ညောင်နှစ်ပင်)သို့ ၂၁.၅ မိုင် (၃၃.၈၁ ကီလိုမီတာ) ရှည်လျားသော မြေသားရေပေးမြောင်း(Open Channel) ဖြင့် ရယူလျက်ရှိပါတယ်။ ငမိုးရိပ် ရေသန့်စင်စက်ရုံမှ တစ်ရက်လျှင် ရေဂါလန် သန်း ၉၀ အားသန့်စင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့တော်သို့ ပိုက်လိုင်းစနစ်ဖြင့် ပေးဝေလျှက် ရှိပါတယ်။
ယခုလက်ရှိအခြေအနေအရ ရန်ကုန်မြို့တော်သို့ ရေပေးဝေလျှက်ရှိသည့် ရေပမာဏ၏ ၆၆ % ခန့်သည် ငမိုးရိပ်ဆည် ရေပေးရေးစနစ်မှ ရယူထားရခြင်း၊ ငမိုးရိပ်ဆည်မှ ရေသန့်စင်စက်ရုံသို့ ရေသွယ်ယူရာတွင် မြေသားရေပေးမြောင်း ကို အသုံးပြုထားသဖြင့် အငွေ့ပျံခြင်း၊ ရေစိမ့်ထွက်ခြင်းများကြောင့် ရေလေလွင့် ဆုံးရှုံးမှုများရှိခြင်း၊ ရေပေးမြောင်းတလျှောက်ရှိ ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူနှင့် တိရစ္ဆာန်များ အသုံးပြုခြင်းများကြောင့် ၎င်းတို့၏ အညစ်အကြေးများနှင့် စိုက်ပျိုးမြေများမှ ဓာတ်မြေဩဇာများ၊ ပိုးသတ်ဆေးများ ရေပေးမြောင်းအတွင်း စီးဆင်းပျော်ဝင်မှုများကြောင့် ရေသန့်စင်စက်ရုံသို့ ဆည်ရေ ရောက်ရှိချိန်တွင် ရေအရည်အသွေး ကျဆင်းလျက်ရှိခြင်း၊ ရေပေးမြောင်းမကြီးသည် ဆည်မြောင်း နှင့် ရေအသုံးချမှု စီမံခန့်ခွဲရေး ဦးစီးဌာန၏ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု အောက်တွင် ရှိသဖြင့် သောက်သုံးရေအပြည့်အဝရရှိရန် အဆိုပါဌာနသို့မှီခိုနေရခြင်း၊ ရေပေး မြောင်းမကြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများ ပြုလုပ်ချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့တော်သို့ ရေအပြည့်အဝပေးဝေရန် အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ နေ့စဉ်သောက်သုံးရေ ပေးဝေခြင်း ပြတ်တောက်မှု မရှိစေရန် ဦးစားပေးရခြင်းကြောင့် ရေပေး မြောင်းမကြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ပြုလုပ်ရန် အခက်အခဲရှိခြင်း စသည် တို့ကြောင့် ရေပိုက်လိုင်းဖြင့် ရေသွယ်ယူခြင်းစနစ်အား မဖြစ်မနေ ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်ရန် အရေးတကြီး လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
စီမံကိန်းအတွက် ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းလေ့လာဆန်းစစ်မှု(Feasibility Study)ကို ရန်ကုန်မြိုတော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနှင့် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်(Asia Development Bank)မှ နည်းပညာပိုင်း ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များ ပူးပေါင်း၍ ၂၀၁၈ ခုနစ် ဩဂုတ်လမှ ၂၀၁၉ ခုနစ် ဩဂုတ်လအထိ ၁ နှစ်ကြာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Feasibility Study အရ ငမိုးရိပ်ဆည်မှရေကို ငမိုးရိပ်ရေသန့်စင်စက်ရုံ(ညောင်နှစ်ပင်)သို့ သယ်ယူရာတွင် လက်ရှိအသုံးပြု နေတဲ့ မြေသားရေပေးမြောင်း အစား အချင်း ၂.၄ မီတာ၊ အရှည် ၂၂.၃ မိုင် (၃၅.၉ ကီလိုမီတာ)ခန့်ရှိ ပိုက်လိုင်းအသုံးပြု၍ သွယ်တန်းရယူနိုင်ကြောင်း လေ့လာ တွေ့ရှိရပါတယ်။
စီမံကိန်းကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ်တွင် ဆောင်ရွက် မည် ဖြစ်ပြီး၊ စီမံကိန်းကာလမှာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၂၅ ခုနစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ ၅ နှစ် ဖြစ်ပါတယ်။ စီမံကိန်းအတွက် ရယူမည့် ရေအား စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် လည်းကောင်း၊ ရေပိုက်လိုင်းမြေနေရာ အသုံးပြုခွင့်အား ဆောက်လုပ်ရေ:ဝန်ကြီးဌာနနှင့် လည်းကောင်း၊ လျှပ်စစ်မီးရယူနိုင်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန တို့နှင့် လည်းကောင်း အသီးသီးညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက် ရရှိပြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
စီမံကိန်းမှာပါဝင်မယ့် လုပ်ငန်းစဉ်များကတော့ ငမိုးရိပ်ဆည်တွင် တစ်ရက်လျှင် ရေဂါလံ ၁၈၀ သန်း ရယူနိုင်မည့် ရေယူအဆောက်အအုံသစ်တစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်း၊ ၀.၉ ကီလိုမီတာ ရှည်လျှားပြီး ၂၄၀၀ မီလီမီတာ အချင်းရှိသည့် ရေယူဥမင်လှိုဏ်တစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်း၊ 180 MGD/4 MVA စွမ်းအားရှိသည့် ရေတွန်းစက်ရုံနှင့် ဓာတ်အားခွဲရုံ တစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်း၊ ၂၄၀၀ မီလီမီတာ အချင်းရှိပြီး၊ ၁၇.၁ ကီလိုမီတာ ရှည်လျားသည့် ပင်မရေပိုက်လိုင်းတစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်း၊ ၂၇၀၀ မီလီမီတာ အချင်းရှိပြီး ၂.၀ ကီလိုမီတာရှည်လျားသည့် ရေခေါ် ဥမင်လှိုဏ်တစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်း၊ ၂၄၀၀ မီလီမီတာ အချင်းရှိပြီး ၁၅.၉ ကီလိုမီတာ ရှည်လျားသည့် ကမ္ဘာမြေဆွဲအား စနစ်ဖြင့် စီဆင်းစေမည့် ရေပိုက်လိုင်းတစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်း စတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်ပါတယ်။
စီမံကိန်းကို ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ငမိုးရိပ်ဆည်ရေအား မြေသားရေပေးမြောင်း(Open Channel ) ဖြင့် ရယူခြင်းအစား ရေပိုက်လိုင်းဖြင့် အစားထိုးရယူဆောင်ရွက်ရာတွင် ရေအရည်အသွေးပိုမို ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ ရေလေလွင့်ဆုံးရှုံးမှု မရှိစေခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် ညစ်ညမ်းမှုများ မဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်း၊ ရေသန့်စင်စက်ရုံအတွက် ရေလိုအပ်ချက်အား လွတ်လပ်စွာ စီမံ ခန့်ခွဲနိုင်ခြင်း၊ ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနမှ ရေပေးမြောင်းမကြီး(Open Channel) ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ရန်ကုန်မြို့တော်ရေပေးဝေရေးကို ထိခိုက်နိုင်သည့် ဖြစ်ရပ်များအား ရှောင်ရှားနိုင်ခြင်း၊ အနာဂတ်တွင် ရေပေးဝေနိုင်သည့် ပမာဏ ပိုမိုတိုးချဲ့နိုင်ခြင်း၊ ပြည်သူများအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေး နိုင်ခြင်း စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေပိုက်လိုင်း ခရီးတစ်ဝက်ကျော်ခန့်ကို ရေတွန်းစက်ဖြင့် တွန်းပို့မှာဖြစ်ပြီး ကျန်ခရီးကို ကမ္ဘာမြေဆွဲအားဖြင့် ဆက်လက်စီးဆင်းစေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် စွမ်းအင်ကိုလည်း လျော့နည်းသုံးစွဲနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနယ်နိမိတ် အတွင်းရှိ မြို့နယ်များအား လှော်ကား၊ ဖူးကြီး၊ ဂျိုးဖြူ၊ ငမိုးရိပ် ရေလှောင်ကန်များနှင့် အဝီစိတွင်းများ စသည့် ရေအရင်း အမြစ်များမှ နေ့စဉ် ရေဂါလန် ၂၀၅ သန်း ပေးဝေလျှက်ရှိပါတယ်။ နေ့စဉ် ရေပေးဝေမှု ပမာဏ အားလုံးရဲ့ ၉၀ % ကိုမြေပေါ်ရေမှ ရရှိပြီး၊ ကျန် ၁၀ % ကို မြေအောက်ရေမှ ထုတ်ယူ အသုံးပြုထားပါတယ်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်း မှတ်တမ်းအရ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နယ်နိမိတ် အတွင်းမှာ နေထိုင်တဲ့ လူဦးရေ ၅.၁၆ သန်း ရှိတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိတဲ့ စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၅၁.၄ သန်းရဲ့ ၁၀% ခန့်ဟာ ရန်ကုန်မြို့တော်မှာ နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးသည် စီးပွားရေးမြို့တော်ဖြစ်သည်နှင့် အညီ မြို့ပြ ဖွံ့ဖြိုးမှုများ တိုးတက်လာခြင်း၊ စီးပွားရေးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာခြင်း၊ ရေပေးဝေရမည့် မြို့တော်နေလူဦးရေကလည်း YCDC & JICA Master Plan, 2017 အရ နှစ်စဉ် ၂.၀၉ % ခန့် တိုးပွားလာခြင်း တို့ကြောင့် ရေပေးဝေရေး စီမံခန့်ခွဲမှုများတွင် အနာဂါတ်အတွက် ရေအရည်အသွေးပိုမို ကောင်းမွန်ရန် လိုအပ်ခြင်းနှင့် ရေလိုအပ်ချက် ပိုမိုလာခြင်းများနှင့်လည်း ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ နေရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း ငမိုးရိပ်ရေသန့်စင်စက်ရုံ(ညောင်နှစ်ပင်)ကို လက်ရှိ တစ်ရက် ရေဂါလန်သန်း ၉၀ သန့်စင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့တော်သို့ နေ့စဉ် ပေးပို့နေရာမှ နောက်ထပ် တစ်ရက် ရေဂါလန်သန်း ၉၀ ထပ်မံသန့်စင်နိုင်အောင် ရေသန့်စင်စက်ရုံအား ထပ်မံတိုးချဲ့ခြင်းနှင့် ရန်ကုန်မြို့တော်သို့ နေ့စဉ် ရေဂါလန်သန်း ၉၀ ထပ်မံပို့ဆောင်နိုင်အောင် ရေပို့ပိုက်လိုင်းများ တိုးချဲ့တပ်ဆင်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်သွားနိုင်အောင်လည်း ရည်မှန်းချက်ထား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့တော်ကို ရေဖူလုံစွာ ပေးဝေနိုင်ရေးအတွက် တင်ပြပါ စီမံကိန်းအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Water Resources and Water Supply Authority, YCDC
ရန်ကုန်ရေချစ်သူများသို့ ရန်ကုန်မြို့တော်ရေဖူးလုံရေးစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရန် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၈၀ ချေးငွေရယူရေးကိစ္စကို ၂၄-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သော......
ငမိုးရိပ်ရေသန့်စင်စက်ရုံ(ညောင်နှစ်ပင်)တွင် ဒုဆင့်စက်ရုံ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပိုင်းဆိုင်ရာများကို YESC နှင့် ပူးပေါင်းစစ်ဆေး ပြင်ဆင်လျက်ရှိရာ ၁၈း၃၀ အချိန်တွင် Transformer အားလည်းကောင်း၊ ၁၈း၅၃ အချိန်တွင် Feeder များအားလည်းကောင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းပြီး စမ်းသပ်စစ်ဆေးရာ ၁၉း၁၃ အချိန်တွင် Feeder အားလုံး...
ငမိုးရိပ်ရေသန့်စင်စက်ရုံ(ညောင်နှစ်ပင်)တွင် ဒုဆင့်စက်ရုံ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပိုင်းဆိုင်ရာများကို YESC နှင့် ပူးပေါင်းစစ်ဆေး ပြင်ဆင်လျက်ရှိရာ ၁၈း၃၀ အချိန်တွင် Transformer အားလည်းကောင်း၊ ၁၈း၅၃ အချိန်တွင် Feeder များအားလည်းကောင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းပြီး စမ်းသပ်စစ်ဆေးရာ ၁၉း၁၃ အချိန်တွင် Feeder အားလုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းနိုင်ပြီး စစ်ဆေးအောင်မြင်သည့်အတွက် ၁၉း၃၀ အချိန်တွင် ဒုဆင့် ရေတွန်းစက်ကြီးတစ်လုံးကိုလည်းကောင်း၊ ၁၉း၅၀ အချိန်တွင် ဒုဆင့် ရေတွန်းစက်ကြီး ဒုတိယတစ်လုံးကိုလည်းကောင်း စုစုပေါင်းရေတွန်းစက် ၂ လုံးကို မောင်းနှင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။
ရပ်နားချိန်ကြာမြှင့်ခဲ့သဖြင့် ရေသန့်စင်မှုစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာများကိုလည်း ပြန်လည်စစ်ဆေးလျက်ရှိရာ အချိန် ၂ နာရီခန့်ကြာ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါ၍ ယနေ့ည ၁၀း၀၀ နာရီခန့်တွင် သန့်စင်ပြီးရေအပြည့်အဝ ထွက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့မှသာ ရေတွန်းစက်ကြီး ၄ လုံးအား Full Load မောင်းနှင်နိုင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့သို့ရေတွန်းပို့နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ငမိုးရိပ်ရေသန့်စင်စက်ရုံ(ညောင်နှစ်ပင်)၏ ပဆင့်နှင့် ဒုဆင့် ရေတွန်းစက်များ မောင်းနှင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါ၍ ည ၈ နာရီခန့်တွင် ရေကူးရေတွန်းစက်ရုံမှလည်း Full Load မောင်းနှင်နိုင်ပြီးဖြစ်ပါသောကြောင့် ကုက္ကိုင်းရေလှောင်ကန်သို့ ယနေ့ည ရေအပြည့် တင်နိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းသုံးသပ်ရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ကုက္ကိုင်းရေလှောင်ကန်ရေပြည့်ပါက နက်ဖန်မနက်ပိုင်းတွင် Downtown မြို့နယ်များ ရေအပြည့်အဝ ရရှိနိုင်ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။
ရန်ကုန်ရေချစ်သူများသို့ ငမိုးရိပ်ရေသန့်စင်စက်ရုံ(ညောင်နှစ်ပင်)တွင် ဒုဆင့်စက်ရုံ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပိုင်းဆိုင်ရာများကို YESC နှင့် ပူးပေါင်းစစ်ဆေး ပြင်ဆင်လျက်ရှိရာ ၁၈း၃၀ အချိန်တွင် Transformer......
This is the summary of the students group on Myanmar - Netherlands Water Challenge 2018 on 1 August.General InformationOne of the activities of YCDC...